Droplr ndiyo Yakanyanya Kugovana Faira Turu Inowanikwa | Martech Zone
Bhokisi, Dropbox, Google Drive… nevatengi vakawanda zvakadaro vachishandisa mapuratifomu akasiyana, maforodha evatengi angu idambudziko. Kamwe chete pasvondo kana zvakadaro, ini ndinofambisa data rangu rese remutengi kune rakarongedzwa uye rakarongeka network share inotsigirwa. Zuva nezuva, zvakadaro, yanga iri njodzi kuedza kutsvaga nekutumira mafaera… kusvika zvino.
Watinoshanda naye agency anoshandisa Dropr. Kuzeza kutora imwezve faira yekugovana, ini handina kutengeswa pakutanga. Nekudaro, nekufamba kwenguva ndasvika pakuda zvakapusa zveplatform yavo. Kana ini ndichida kugovera faira, ini ndinongozvvuzvurudza kubhaji rangu rekushandisa uko kwayakadzvanywa uye chinongedzo chakapihwa. Ini ndinogona kutumira iyi link kune yangu mutengi uye boom… ivo vaine iyo faira. Hapana windows yekuvhura, kutsvaga maforodha, kuwiriranisa… ingo isa uye tumira. Iyo yakajeka mukureruka kwayo.
Droplr Faira Kugovana kweMac Tour
Droplr Faira Kugovana yeWindows Tour:
Droplr Pro maficha anosanganisira:
Tora uye tsanangura screenshots - kusanganisira mawebhusaiti uye akawanda mafaera.
Rekodha iyo skrini kuti upe yakazara mufananidzo
Shandisa zvishandiso zvine simba - zvinosanganisira Gmail, Google Docs, Trello, Slack, Photoshop, Intercom, Sketch, Atlassian Confluence, Atlassian HipChat, Atlassian Jira, Microsoft Teams, Apple Messages, Discord, uye Skype.
Kurumidza kutumira kunyange makuru mafaira
Muchena chena mafaera aunotumira
Tinya muzvikwata zvekubatana pamwe
Seta yekuzviparadza iwe pachako mafaera kana kuachengeta nekusingaperi
Maka mafaera aunochengeta
Dzivirira mafaira ako ne password
Gadzira uye ugovane mabhodhi akazara nezviri mukati
Ona kusangana kwemushandisi nemafaira muDrop Analytics
Gadza yakasarudzika subdomain kana duraini
Iwe unogona kusainira Droplr mahara, kana kuenda pro kune mashoma madhora pamwedzi (yakakurudzirwa kwazvo). Droplr haingokutenderi iwe kuti ugovane ipapo ipapo mafaera, iwe unogona zvakare kugovana pa - screen zvemukati kubva pakombuta yako. Izvi zvinoita kuti ukwanise kumhanyisa kufamba kwako uye nekuisa imwe hunyanzvi kumashure muzuva rako.
Saina Up kune Droplr
Ongorora: Ndiri kushandisa yangu yakabatana chinongedzo mune ino posvo!
Tags: Apple MesejiAtlassian KusanganaAtlassian HipChatAtlassian JiraKurwisanakudonhedzakugovera fairaGmailgoogle docsIntercomMicrosoft TeamPhotoshopSketchSkypeusimbeTrello